Hilton amin'ny làlan-kaleha mihoatra ny avo roa heny ny dian-tongony any Afrika
Home » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Hilton amin'ny làlan-kaleha mihoatra ny avo roa heny ny dian-tongony any Afrika
Rehefa manohy mampitombo ny fisiany any Afrika amin'ny alàlan'ny fampidirana marika vaovao sy hiditra firenena vaovao, nanambara i Hilton (NYSE: HLT) androany fa eo am-pelatanan'ny habe mihoatra ny avo roa heny izy ao anatin'ny dimy taona manaraka miaraka amin'ny fanokafana ny Legend Hotel Lagos Airport, Curio Collection nataon'i Hilton - trano fandraisam-bahiny voalohany an'i Curio Collection an'ny hotely any Afrika.
Ny seranam-piaramanidina Legend Hotel Lagos dia miorina ao amin'ny seranam-piaramanidina iraisampirenena Murtala Muhammed, izay mahazaka mpandeha valo tapitrisa mahery isan-taona. Ny hotely tsara tarehy dia mifanila amin'ny tobin'ny fiaramanidina tsy miankina amin'ny seranam-piaramanidina ary manana birao fifindra-monina sy birao manokana ao amin'ny hotely ho an'ny mpandeha jet tsy miankina. Voatendry ho ampahany amin'ny fanangonana manokana hotely sy trano fandraisam-bahiny tokana ankalazaina noho ny maha-izy azy ireo, ny hotely dia manatevin-daharana trano fandraisam-bahiny 60 avy amin'ny Curio Collection manerantany. Ity no trano fandraisam-bahiny voalohany an'i Hilton any Lagos ary ny faharoa ao Nizeria, miaraka amin'ny trano fandraisam-bahiny fito misy fantsom-pandrosoana ho an'ny firenena.
Raha niresaka mialoha ny Africa Hotel Investment Forum (AHIF) any Nairobi, ny filoha sady CEO an'ny Hilton, Chris Nassetta, dia nilaza hoe: "Manohy manavao any Afrika izahay miaraka amin'ny marika sy vokatra vaovao, ary faly izahay mampiditra ny marika Curio Collection eto amin'ny fanokafana ny Legend Hotel Lagos Airport. Satria mbola manohy ny fanaovana tanàn-dehibe haingana ny kaontinanta, miaraka amin'ny vinavinan'ny Firenena Mikambana fa ny tanàna 10 mitombo haingana indrindra dia eto Afrika avokoa amin'ny 2035, ity hotely ity dia ampahany amin'ny paikadinay hampifandraisana ny vahiny amin'ireo tanàna lehibe sy toerana misy seranam-piaramanidina manerana ny faritra. "
Hitan'i Hilton ny fangatahana mafy an'ireo marika any amin'ny kaontinanta ary manantena ny hisokatra hotely valo izy manerana an'i Afrika amin'ity taona ity, ny telo amin'izy ireo dia hisidina eo ambanin'ny sainan'ny Hilton Garden Inn. Ity marika ity dia manintona ny fiakaran'ny vidin'ireo mpandeha antonony miditra sy manerana an'i Afrika ary manantena ny hanokatra hotely 16 Hilton Garden Inn farafaharatsiny ao anatin'ny dimy taona ho avy, ao anatin'izany ny fidirana marika any Kampala, Ghana, Malawi, eSwatini (Swaziland teo aloha) ary toerana stratejika maro hafa manerana an'i Afrika atsimon'i Sahara.
Tamin'ny taon-dasa, natombok'i Hilton ny Initiative Growth Initiative an'ny Hilton Africa, izay hanohana ny fivadihan'ny hotely misy ho an'ny marika Hilton miaraka amin'ny fampiasam-bola 50 tapitrisa dolara amerikana ao anatin'ny dimy taona. Nandritra io vanim-potoana io dia nanantena i Hilton fa hanana fotoana ahafahana miova 100 miaraka amina efitrano 15-20,000 eo ho eo ampiana ny portfolio-ny mba hamaly ny filan'ny hotely marika tsara manerana ny kaontinanta.
Hilton dia manolo-tena amin'ny fitomboana sy ny fahafaha-manao manerana an'i Afrika ary efa nisy hatrany amin'ny kaontinanta hatramin'ny 1959. Miaraka amin'ny trano fandraisam-bahiny miisa 41 ary 53 amin'ny fantsom-pivoarana ao Afrika, dia manantena ny hampiakatra avo roa heny ny dian-tongotra manerana ny kaontinanta i Hilton ao anatin'ny dimy taona ho avy. Tafiditra ao anatin'izany ny fidirana amin'ny tsena any amin'ny firenena 13 izay tsy iasany amin'izao fotoana izao ao anatin'izany i Botswana, Ghana, eSwatini (Swaziland taloha), Uganda, Malawi ary Rwanda.
Tian'ireo mpandeha any India ny tanàna Golden
ABCC hanehoana fanjakana Arabo ao amin'ny foara fizahan-tany any Brezila